Mba hahafahan’ny isam-pianakaviana manao fety sambatra dia manomana tolotra miavaka ho an’ireo mpanjifany ny banky BNI. “Crédit vina 24 h” no anarana nampitondrainy azy io, fampindramam-bola hahazoana valiny ao anatin’ny 24 ora avy hatrany. 12 % ny tahan-jana-bola amin’izany raha hatramin’ny 8 tapitrisa Ar kosa ny vola azo alaina. Ao anatin’ny enina ka hatramin’ny 60 volana no fe-potoana hahafahana mamerina azy. Ankoatra ity tolotra ity, ahitana fihenam-bidy 50 % ihany koa ny “pack centenaire” isaky ny zoma mandritra ny lalao CAN izay hanomboka anio. Mbola tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha-100 taonan’ity banky iray ity avokoa izany. Tsiahivina fa mpanohana ofisialy ny ekipam-pirenena BAREA ny banky BNI Madagascar.